DONALD TRUMP OO SU’AALO LAGA WEYDIIN DOONO DOORASHADII 2016-KA DHACDAY WADDANKA MAREYKANKA | Saxil News Network
DONALD TRUMP OO SU’AALO LAGA WEYDIIN DOONO DOORASHADII 2016-KA DHACDAY WADDANKA MAREYKANKA
Washington:-(saxilnews.com) Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegeysa in dacwad ogaha khaaska ah ee baaraya faragelin la sheegay in Ruushka uu farageliyay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadii 2016-kii uu doonayo in uu wareysi la yeesho madaxweyne Donald Trump toddobaadyada soo socda.
Aqalka cad ayaa sheegay in uu aad ula shaqeyn doono baaritaankani isla markaana uu gacan ka geysan doono.
Maalin ka dib markii ay soo baxday in Robert Mueller uu waraysi la yeeshay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, Jeff Sessions ayaa wargeyska Washington Post waxa uu ku warramayaa in kooxda dacawd oogahaasi hadda doonayaan inay waraystaan madaxweyne Trump.
Waxaa la sheegay in baarayaashaasi ay doonayaan in madaxweynaha ay ka ogaadaan in asaga ama qof ka tirsan maamulkiisa ay isku dayeen inay horjoogsadaan baaritaanka socda.
Waxaa la rumaysan yahay in su’aalahaasi diiradda lagu saari doono go’aanka uu madaxweyne Trump shaqada kaga eryay agaasimihii FBI-da, James Comey, iyo iscasilaadii la taliyahiisii ammaanka qaran, Michael Flynn.
Aqalka cad ayaa sheegaya in aanay run ahayn eedeymaha sheegaya inuu xiriir dhexmaray maamulka Trump iyo Ruushka, isla markaana aanu ka hadli doonin cidda ay waraysan doonaan kooxda uu hogaaminayo Robert Mueller